I-ONLYOFFICE DocServer 6.4 iza nezithuthukisi eziningana ku-suite | Kusuka kuLinux
Uhlobo olusha lwe I-ONLYOFFICE DocumentServer 6.4 isivele ikhishiwe nakule nguqulo entsha okunye ukuthuthukiswa kokusekelwa kungeziwe, kanye nezinguquko ngaphakathi kwezicelo zalesi suite ezithuthukisa ulwazi lomsebenzisi.
Kulabo abangajwayele i-ONLYOFFICE DocumentServe, kufanele ukwazi lokho ukuqaliswa kweseva kwabashicileli abakwi-inthanethi nokusebenzisana kwe-ONLYOFFICE. Abahleli bangasetshenziswa ukusebenza ngemibhalo yokucubungula amagama, amaspredishithi, nezethulo.
I-Office kuphela ithi ihambisana ngokuphelele namafomethi we-MS Office ne-OpenDocument. Amafomethi asekelwayo: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Kungenzeka ukwelula ukusebenza kwabahleli ngama-plugins, ngokwesibonelo kukhona ama-plugins atholakalayo ukudala izifanekiso nokungeza amavidiyo we-YouTube.
1 I-ONLYOFFICE DocumentServer 6.4 Izici Ezintsha Eziyinhloko
2 Ungayifaka kanjani i-ONLYOFFICE Docs 6.4 ku-Linux?
2.1 Ukufaka ngephakeji le-RPM
I-ONLYOFFICE DocumentServer 6.4 Izici Ezintsha Eziyinhloko
Kule nguqulo entsha ungeze ukusekelwa kwe-WOPI protocol (I-Open Platform Web Application Interface) esetshenziselwa ukufinyelela kumafayili kumaseva we-Microsoft, Google, ne-Nextcloud.
Kubuye kuqhakanjiswe lokho ukusekelwa kwezitayela zehluzo kuthuthukiswe kakhulu, kusukela sfuthi wengeza izitayela zezithombe zabangaboni kahle (ngokwesibonelo, kwavela isitayela esikhethekile sabantu abane-colorblind).
Futhi kungezwe ukusekelwa kwemisebenzi ye-batch ngamazwana, ngokwesibonelo, manje ungasusa noma umake wonke amazwana abukiwe ngasikhathi sinye. Kumodi yokuphawula, amathuluzi okulungiselela amalungelo okufinyelela komsebenzisi ayasetshenziswa.
Ngakolunye uhlangothi, kusihleli sombhalo kufakwe inketho yokwenza usonhlamvukazi ngokuzenzakalela kufakwe uhlamvu lokuqala komusho, kuhlanganiswe nokungeziwe imodi entsha yokubuyekeza: ukumaka okulula. Kunikezwe ukusekelwa kokuguqulwa okusheshayo kombhalo kuya etafuleni nokuguqulwa kwetafula kuye embhalweni.
Ku-processor amaspredishithi okwazi ukufaka, ukususa nokuhlela imithetho kuyasetshenziswa ukufometha (imithetho yokuxhumanisa isitayela seseli nokuqukethwe) nokwengezwa kokusekelwa kwama-sparklines - ama-sparkline akhombisa amandla ezinguquko ochungechungeni lwamanani ahloselwe ukufakwa esitokisini.
Ikhono lokuqala i-macro nalo linikeziwe ngokuchofoza entweni yokuqhafaza engeze ukusekelwa kokushintshwa kwepharamitha yephaneli, kwafakwa inketho yokulungiselela ukuboniswa kwamaqanda kumaseli, futhi kungezwe ukusekelwa kwezintambo zokuphawula.
Ku umhleli wesethulo manje unomlando obonakalayo wezinguquko Esethulweni, kanye nokwesekwa kokufihla iphaneli ngamanothi, kunikezwe amandla okuguqula ukumelwa kwezimpawu zezinto zohlu futhi izilawuli manje sezinokusekelwa kokushintsha phakathi kwezinto kusetshenziswa ukhiye wethebhu kanye nenhlanganisela yeShift + Tab.
Of ezinye izinguquko ezigqamile:
Kungezwe ukusekelwa kokungenisa amafayela ngefomethi ye-txt ne-csv.
Kungezwe isici esizilungisayo sezixhumanisi, esishintsha ngokuzenzakalela izixhumanisi zombhalo nezindlela zasendaweni ngama-hyperlink.
Ngokuboniswa ngobuningi bamaphikseli aphezulu, i-interface ingakalwa ize ifike kumazinga we-125% no-175% (ngaphezu kwe-100%, 150% kanye ne-200% ebitholakala phambilini).
Ifayela lokumisa linikeza ithuba lokusetha imaski futhi inike amandla imodi yokubambisana.
Abahleli beselula babhalwe kabusha ngokuphelele kusetshenziswa uhlaka lweReact.
Ungayifaka kanjani i-ONLYOFFICE Docs 6.4 ku-Linux?
Kulabo abanentshisekelo yokukwazi ukuzama leli suite lehhovisi noma ukubuyekeza inguqulo yalo yamanje kule entsha, Bangakwenza ngokulandela izinyathelo esabelana ngazo ngezansi.
Uma bengabasebenzisi beDebian, Ubuntu noma yikuphi ukusatshalaliswa ngokusekelwa kwamaphakheji wedeb, bangakwazi landa iphakethe lesicelo kusuka esigungwini ngomyalo olandelayo:
Ngemuva kokulanda, ungafaka nge:
Uma unezinkinga zokuncika, ungazixazulula ngokwenza umyalo olandelayo ku-terminal:
Ukufaka ngephakeji le-RPM
Okokugcina, kulabo abangabasebenzisi be-RHEL, i-CentOS, i-Fedora, i-openSUSE noma yikuphi ukusatshalaliswa ngokusekelwa kwamaphakeji we-rpm, kufanele bathole iphakethe lakamuva nge umyalo:
Lapho ukulanda sekuphelile, ukufakwa kungenziwa ngomyalo olandelayo:
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-ONLYOFFICE DocServer 6.4 iza nezithuthukisi eziningana ku-suite